RASMI: Frank Lampard Oo Loo Magacaabay Tababaraha Everton & Farriintii Ugu Horreysay Oo Uu U Diray Ciyaartoydiisa - GOOL24.NET
RASMI: Frank Lampard Oo Loo Magacaabay Tababaraha Everton & Farriintii Ugu Horreysay Oo Uu U Diray Ciyaartoydiisa
Kooxda kubadda cagta Everton ayaa tababaraheeda cusub u magacowday halyeygii iyo macallinkii hore ee Chelsea, kaas oo durba diray farriintiisii ugu horreysay waxyar kaddib markii uu xilka qabtay.
Lampard ayaa qalinka ku duugay heshiis laba sannadood iyo badh ah oo uu ku hoggaamin doono Everton, waxaana uu si rasmi ah shaqada uga beddelayaa Rafael Bentiez oo toddobaadkii hore shaqada laga caydhiyey kaddib markii uu hal guul oo kaliya ka keenay 13 ciyaarood oo isku xigay.
Frank Lampard ayaa dib ugu soo noqonaya tababarenimada oo uu ka maqnaa muddo sannad ah, waxaana ugu dambaysay January 2021 oo laga caydhiyey Chelsea oo uu sannad iyo badh u ahaa tababare.
Warbaahinta ayaa uu la hadlay markii uu qalinka ku duugay heshiiska uu tababaraha ugu noqonayo Everton, waxaanu sheegay ‘inuu guul u gaajaysan yahay’, isla markaana uu kooxdiisa cusub ee Everton ka doonayo inay libin ka keenaan garoomada.
“Sharaf weyn ayay ii tahay in aan metelo oo aan maamulo koox baaxaddan baaxadda iyo taariikhda weyn ee Everton. Aad ayaan ugu gaajaysanahay bilaabista shaqadayda.” Ayuu yidhi Lampard oo hadlayay markii uu heshiiska saxeexay.
Isaga oo sharraxaya sidii uu ku ogolaaday inuu noqdo tababaraha Everton, waxa uu Lampard yidhi: “Kaddib markii aan la hadlay mulkiilaha, guddoomiyaha iyo boodhka, waxa aan aad u dareemay samirkooda iyo damacooda. Waxa aan rajaynayaa in iyaguna ay dareemeen damacayga iyo sida adag ee aan doonayo in aan u shaqeeyo oo aanu wada-jir ugu soo noqono [heerkii ay hore u joogtay kooxdu].
“Waxa kale oo aad dareemi karaysaa samirka ay taageereyaashu u hayaan kooxdooda. Taas ayaa muhiimad weyn leh. Koox ahaan, heerka tartanka horyaalka Premier League waa in aanu dib usoo celino, booska aanu ku jirnana aanu sare uga soo baxno.
“Farriintayda aan u dirayo ciyaartoydu waa in aanu si wada-jir ah uga shaqayno in kooxdu guulo gaadho. Waxa aanu isku dayi doonaa in aanu qabsano shaqadayada, taageereyaashana waa hubaal inay na garab istaagi doonaan.”